Etu ị gara ileta White House na Pentagon | Akụkọ Njem
Otu esi aga White House na Pentagon
Mariela Carril | | Ihe ị ga-ahụ, Washington
United States ọ bụ nnukwu obodo mana ekele maka sinima na televishọn e nwere ụfọdụ akara ngosi ebe ndị njem nleta na-achọ ịga leta. Anyị nwere ike ịme ndepụta buru ibu, mana ọ dị m ka saịtị abụọ ahụ dị na isiokwu nke isiokwu taa so na Top Five, nri?
La White House Ọ bụ oche nke ike America, ma ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ otú Hollywood na Pentagon ọ dị ka saịtị dị omimi nke mkpebi agha dị mkpa. Na-aga United States? Ya mere, lee, m ga-ahapụrụ gị ihe niile ị chọrọ ịma mgbe ị na-eme nnukwu nleta abụọ a.
1 Gaa na White House
2 Gaa na Pentagon
Gaa na White House
Houselọ White House Ọ bụ ebe obibi nke Onye isi ala nke United States maka oge nke oge ya, mana ndị gara Washington DC nwere ike ịga leta ịmụ akụkọ na omenaala ndị America. Ruo obere oge gara aga, ịnweghị ike ịse foto, ihe na-akụda mmụọ, ọ bụ ezie na ọ bara uru, mana site na afọ gara aga Nwanyị mbụ Michelle Obama nyere ikike foto ndị ahụ na ama White House Tour.
N'ezie, teknụzụ ọhụụ etinyere nnukwu nsogbu n'okwu a, mana ha manyere usoro nchekwa dị oke. N'oge a foto ndị njem nleta na-abanye n'ime ụlọ enwere ike ibudata na netwọkụ mmekọrịta site na iji hashtag WhiteHouseTour. Yabụ kedu ka ị ga - esi debanye aha maka njem nlegharị anya nke White House? Nke mbụ ị ga-eme ndoputa ma ị nwere ihe ruru ọnwa isii tupu ịme ya na-erughị izu atọ.
Arịrịọ maka nleta Ikwesiri ime ya site na ụlọ ọrụ nnọchite obodo nke mba gị na Washington. Ga-ahapụrịrị ozi kọntaktị, ụbọchị na ọnụ ọgụgụ nke ndị mejupụtara otu gị. A na-eme njem nlegharị anya site na 7: 30 ruo 11: 30 n'ụtụtụ, Tuesday ruo Tọzdee, na Fraịde ruo Satọde n'etiti 7:30 nke ụtụtụ na 1:30 elekere..
Enwere ihe ndị ị na-enweghị ike ịbanye gaa White House: igwefoto, kamera vidio, nri, ihe ọ drinksụ drinksụ, sịga ma ọ bụ ọkpọkọ, mmiri mmiri, gel, lotions, ngwa ọgụ, mma ma ọ bụ ihe dị nkọ, akpa, akpa, obere akpa, wdg. Nwere ike ịhapụ ihe ndị a niile na họtel ndị dị nso, na igbe nke ha na-akwụ obere mana mana ịhapụrụ ị nwere ihe niile n'aka. White House enweghị mkpọchiEe ụlọ nkwari akụ na Union Station nke dị nso. Eeh, inwere ike iji igodo, obere akpa, ekwentị mkpanaaka na nche anwụ bata.
Dị ka m kwuru n'elu, site na afọ gara aga ị nwere ike iji obere igwefoto na igwe nwere foto were foto. Enweghị ndekọ vidiyo ma ọ dịghị osisi selfie kwere. Njegharị a dị ọkara otu awa ozugbo ị gafere usoro nchebe. Ga-agafe ọtụtụ ụlọ mana ị gaghị abanye na akụkụ nke ebe obibi nke onyeisi oche na ezinụlọ ya bi, ma ọ bụ Olọ a ma ama a na-akpọ Oval na West nku. Eeh, enwere ndị ọrụ nzuzo nzuzo n’ebe niile ma enyere ha ike ịza ajụjụ ka gị na ha wee nwee ike ịmekọrịta.
Ozi bara uru:
Otu esi aga White House: Thezọ kachasị nso na ọnụ ụzọ maka njem nlegharị anya bụ Metro Center (ọpụpụ 13th Street). You rute n’elu igwe mgbago, were ọpụpụ 13th Street South, tụgharịa aka nri na E Street wee gawa 15th Street. Ọ bụrụ nbanyeghi na njegharị ọ bụla ma ị na-aga n’onwe gị, ị kwesịrị ịbịa n’oge. Ọ bụ n'okporo ámá 15th ka akara ahụ na-etolite.
Vislọ ndị ọbịa na White House bụ ụlọ ole na ole site na White House ma ọ bara uru ịga leta. Emeghachitere ya, ihe ngosi ohuru ya bu ihe dika ihe 90 nke ndi White House Historical Association nyere na otutu n’ime ha egosighi. Enwere tebụl Franklin D. Roosvelt, dịka ọmụmaatụ, a na-atụkwa vidiyo vidiyo na-atọ ụtọ nke 14 na ọ ga-adị mma ile anya tupu otu njegharị ahụ.
Nleta ahụ niile na-ewe otu awa na ọkara. Saịtị a na-emeghe kwa ụbọchị ma e wezụga Christmas, Inye Ekele na Afọ Ọhụrụ site na 7:30 nke ụtụtụ ruo elekere anọ nke anya na ọnụ ụzọ bụ n'efuka. Nwere onyinye ụlọ ahịa na enwere oyiri nke oche onye isi ala na ime ụlọ Oval ebe ị nwere ike ịse foto. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị nwere njem ị ga-eme n'oge na-adịghị anya, m ga-agwa gị na na Disemba 1 a ga-agbanye ọkụ nke White House Christmas Tree.
Njegharị nke White House bụ n'efu.
Gaa na Pentagon
Pentagon dị na mpụga Washington DC, na Arlington. Ọ bụ ihe Ogige GGeneral nke Ngalaba Nchebe nke United States y Ọ bụ oghe maka njem njegharị.
Njegharị ndị a eduzi enwere ike ịgba ha akwụkwọ ruo ụbọchị iri na anọ tupu njem ahụ ma ọ bụghị karịa ụbọchị iri itoolu tupu oge eruo. Emee site na Mọnde ruo Fraịdee, ma e wezụga ezumike, n’agbata elekere itoolu nke ụtụtụ na elekere atọ nke abalị. Ndị otu a na-ejupụta ọsịsọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme nleta ahụ, ị ​​ga-ede akwụkwọ n'oge. A ga-etinye akwụkwọ anamachọihe nke ndị mba ọzọ site na ụlọ ọrụ ndị nnọchi anya mba.
Njegharị ndị a na-eduzi na-ewe otu awa ma kpuchie ihe dị ka kilomita abụọ n'ime ụlọ a na-achọsi ike bụ nke kachasị ukwuu n'ụwa. A ga-akọwara gị akụkọ ihe mere eme nke alaka anọ nke ndị agha US kewara na ị ga-enwe ike ịga na ncheta nke dị n'ime nke emere na Septemba 11, 2001. E nwere ụlọ ụka na Halllọ Nzukọ nke Ndị dike nwere aha nke ndị nwụrụ anwụ.
Enweghị ebe a na-adọba ụgbọala na pentagon ka ị ga-abịarịrị site njin ụgbọ njem ọha. Ebe kacha nso bụ Pentagon na mpaghara oroma metro, mana ọ bụrụ na ịnwere ụgbọ ala ị nwere ike ịhapụ ya ka ọ kwụrụ na Pentagon City Mall wee jee ije nkeji ise nkewapụrụ ya na ụlọ ndị agha site na ọwara ụkwụ. Ọnụ ụzọ ndị ọbịa na-eme site na windo Pentagon Tour nke dị nso n'ọnụ ụzọ ụzọ ụgbọ oloko.
Ikwesiri ikwenye ma obu lelee ma ọ dịkarịa ala otu awa tupu njem ahụ ndokwa n'ihi na ị ga-agafe usoro nchekwa ma chee akwụkwọ nkwenye ndoputa na akwụkwọ ikike ngafe. Anaghị anabata nnukwu akpa ma ọ bụ akpa azụ ma ọ bụ mobiles, kamera ma ọ bụ ngwaọrụ kọmputa nke ọdịdị ọzọ. Mgbe ime njem dị n'ime, ana m akwado ka ị na-agagharị, nke bụ ebe Ncheta 11/XNUMX dị, ihe dị ka nkeji iri na-eje ije na-eso ihe ịrịba ama ahụ.
Otu njem, otu obodo, nleta abụọ dị ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Washington » Otu esi aga White House na Pentagon
Ihe ịhụ n’obodo Atens
Nleta Vatican City